सौन्दर्यका लागि महिलाले भुलेर पनि प्रयोग गर्नुहुन्न यी चिज - Kendrabindu Nepal Online News
सौन्दर्यका लागि महिलाले भुलेर पनि प्रयोग गर्नुहुन्न यी चिज
लाइफ स्टाइल, सौन्दर्य
केन्द्रबिन्दु डेस्क । काठमाडौं, १० साउन ।
आफूलाई सुन्दर देखाउने चक्करमा अन्धाधुन्द सौन्दर्य सामग्री प्रयोग गर्दा त्यो प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ । अर्थात, हामी जुन प्रयोजनले त्यस्ता सामग्री लगाउँछौं, त्यसले उल्टै हानि गर्न सक्छ । अक्सर महिलाले आफ्नो शरीरको अनावश्यक रौं हटाउन रेजर वा शेभिङ क्रिम लगाउँछन् । यो पुरुषले प्रयोग गर्नका लागि बनाइएको हो । कति महिला पुरुषको परफ्युममा लोभिन्छन् । तर, पुरुषले प्रयोग गर्ने यस्ता गु्रमिङ प्रोडक्ट महिलाका लागि कति हानिकारक हुन्छ ?
छाला विशेषज्ञका अनुसार पुरुष र महिलाको छालामा एकरुपता हुँदैन । पुरुषको छाला महिलाको तुलनामा निकै बाक्लो र दह्रो हुन्छ । त्यसैले पुरुषका लागि जुन ब्युटी प्रोडक्ट बनाइएको हुन्छ, त्यसमा स्ट्रोङ पावर सामग्री प्रयोग गरिएको हुन्छ । त्यही कारण महिलाले त्यस्ता सामग्री प्रयोग गर्दा हानि हुन्छ । खासगरी यी तीन सामग्री महिलाले प्रयोग गर्नै हुन्न ।
फेस स्क्रब लोशन
पुरुषले प्रयोग गर्ने फेस स्क्रब लोशन महिालको फेस स्क्रब लोशनको तुलनामा धेरै कडा हुन्छ । जब महिलाले आफ्नो कोमल एवं नरम छालामा यसको प्रयोग गर्छन्, एलर्जी वा जलन हुनसक्छ । यदि प्रयोग गर्नै नै हो भने, अनुहारमा होइन । बरु, शरीरका अन्य भागमा प्रयोग गर्दा उस्तो असर हुँदैन ।
आफ्टर शेभ लोशन
कति महिलालाई पुरुषका लागि तयार गरिएको आफ्टर शेभ लोशन मन पर्छ । खासगरी त्यसको बास्ना उनीहरूले मन पराउँछन् । त्यसैले महिलाले पनि आफ्टर शेभ लोशन प्रयोग गर्छन् । तर, यसले महिलाको छालामा असर गर्छ किनभने यसमा अल्कोहलको मात्रा धेरै हुन्छ ।
कति युवतीले काखीको रौं हटाउनका लागि शेभिङ रेजर प्रयोग गर्छन्, जो पुरुषको दाह्री जुंगा काट्न बनाइएको हो । तर, यस्तो रेजर प्रयोग गर्दा छाला रुखो हुन्छ ।
दुई युवतीबीचको विवाह, ‘समाजले गर्छन् छि छि र थु थु’ (भिडियो अन्तर्वार्ता)
बिवाहपछि किन बढ्छ महिलाको हिप ? उस्तो छ कारण
सौन्दर्य बढाउने नयाँ उपाय ड्राई ब्रसिङ